Taxanaha LTZ ugu Wanaagsan ee Ballaca Laba-soo-gala Shaft-ka-saaraha Farshaxanka Farshaxanka iyo Warshadda | Lang Tai
Taxanaha LTZ Hore-qalooca Blade Laba-soo-gala Shaft-ku kaxeeya Fan Centrifugal
LTZ taxane daab hore-qaloocsan oo marawaxad-ku-kaxeeye ah oo taageere u ah centrifugal wuxuu qaataa koronto-dhaliyaha hore oo si toos ah ugu xiran matoor ku yaal bannaanka dhexdeeda. Hawada ayaa labada dhinacba mar ka soo gasha. Qaab dhismeedku waa mid sahlan oo la isku halleyn karo. Isla mar ahaantaana, iska -caabbinta soo -galayaasha marawaxadda ayaa la dhimayaa, waxaana la kordhiyaa mugga hawada ee la qiimeeyay iyo waxtarka marawaxadda.
Heerka Waxqabadka Heerka
Socodka hawada: min 178.5 CFM ～ max 9,817.5 CFM (300 m3/h ～ 16,500 m3/h, 10,594.40 ft³/h ~ 58,2692.13 ft³/h)
Cadaadiska taagan: 0.36 ~ 4.012 inches wg (90 ～ 1,000 pa)
Taxanahani waa in lagu maareeyo socodka hawada weyn xawaare hoose oo qayb ka ah nidaamka qaboojiyaha. Noocyadan hore ee qalooca ah ayaa si weyn loogu adeegsadaa unugyada hawada ee la isku qurxiyo, kuwaas oo u baahan cadaadis ma guurto ah oo hooseeya oo taxanahani waa isku mid. Waxay siin kartaa hawo dhammaan noocyada dhismayaasha ganacsiga iyo guryaha, dhirta, maareynta hawo -gelinta hawo -siinta iyo qiiqa hawsha shaqadeeda sida hage hawo, waxay siisaa hawo nadiif ah waxayna gacan ka geysan doontaa ilaalinta jawiga raaxada leh ee beerta xoolaha.
Sida LTZ250M –4 waa daab-hore oo qaloocsan oo marawaxad-ku-kaxeeye ah oo marawaxad wadata oo ah mashiinka dhexda ka riixaya, dhexroorka daab 250mm leh ballac dhexdhexaad ah, baallayaasha mootada 4.
Ku saabsan Rakibaadda
Taageerehani wuxuu adeegsadaa mashiinka dheer si uu si toos ah ugu xiro mootada iyo dalooliyaha wuxuuna leeyahay laba marin oo labada dhinac ah. Si gaar ah u fiirso jihada wareegga.
*** Jihada wareegga caadiga ah ee taageerayaasheena centrifugal waa CW. Haddii isticmaaleyaashu ay rabaan tilmaamo wareeg oo kala duwan, waa inay si cad u tilmaamaan waqtiga dalbashada. ***
Ku saabsan Isticmaalka Mobile -ka
Loo heli karo adeegsiga moobilka oo wata kooxda baytariga ama korontada kale ee gacanta;
Ku Saabsan Korantada & Habka Xawaaraha
Sahayda korontada hal-waji, saddex waji, korontada DC, danab iyo inta jeer ee la habeeyay;
Hababka xawaaraha ee hal-xawaaraha, laba-xawaaraha, sedex-xawaaraha iyo xeerka xawaaraha bilaa-istaagga ah ayaa jira.
Guji si aad u hesho Kataloog>>>
Sida Loo Xulo Qaabaynta?
Waxaan haynaa software ka caawiya dadka isticmaala xulashada qaabeynta. Fadlan la xiriir taageero farsamo.
Markaad dalbanayso, fadlan muuji moodalka marawaxadda, foomka rakibidda, heerka socodka, cadaadiska, xaashida galvanized, flange outlet air iyo shuruudo kale oo gaar ah.
Ku Xidhnow Fiidiyowyada
Ku saabsan Rakibaadda saldhigga, rotor, wheel; Waxqabadka garoonka.
Hore: Taxanaha LTWS Hore-qalooca-daab Faan Hal-gasho ah oo Taageeraha Centrifugal leh Mootada Rotor-ka Dibedda
Xiga: Taxanaha LTZM Labalaad Kootada Hore usheeda dhexe Drive Fan
Fan Fan Centrifugal Warshadeedka
Fanaanka Laba Jibaarka Dib -u -noqoshada Warshadaha Centrifugal Fan
Taageeraha gadaal -gadaal ee gadaal -gadaal u noqda
Taageeraha Centrifugal Industrial